Abavelisi be-Fibre optic abavelisi kunye nababoneleli - China Ifayibha yeFayibha yeCandelo leFektri
Intambo ye-fiber optic, ekwabizwa ngokuba yi-fiber fiber cable yindibano esetyenziselwa ukuhambisa ulwazi ngokukhanya kokukhanya. Intambo ye-fiber optic yakhiwe ukusuka kwenye okanye ngaphezulu kwimicu ye-fiber optic, eqinisiwe kwaye ikhuselwe ngezinto ezizodwa zokuba neepropathi ezifanelekileyo zomzimba ngexesha lolwakhiwo lomnxeba wonxibelelwano.
I-fiber Optical yitekhnoloji evumela ukukhanya ukuba kuhambe kunye neetyhubhu zeglasi ezincinci. Iityhubhu zeglasi zinobubanzi obukhethekileyo, zihlala ziyi-9/125 kunxibelelwano lwendlela enye. Iifayibha eziveliswe ziitekhnoloji ezahlukeneyo ziqinisekisile ukugoba i-radius yokuguqa ityhubhu yemigangatho ye-G652D, G657 A1, G657 A2. Ifayibha cores zifakwe i-inki ngemibala eyahlukeneyo, ezenza ukuba unxibelelwano lube lula ngexesha le-cable cores splicing.
IJera ineentlobo ezahlukeneyo zeentambo ezixhomekeke kwindawo yesicelo, njenge:
1) umgca Intambo ifayibha optic
2) FTTH yehla ifayibha optic intambo
3) usasazo lwangaphakathi intambo yefayibha optic
4) I-cable ye-fiber optic intambo
Iindidi ezahlukeneyo zekhebula zinamalungu ahlukeneyo kwaye asetyenziselwa usetyenziso olwahlukeneyo. Ezinye izicelo zicela ubungqina bamanzi, amandla aphezulu oomatshini, ukumelana ne-UV kwaye siqinisa izinto ezithile (Intambo yentsimbi, i-RFP, umsonto we-aramid, ijeli, ityhubhu ye-PVC njl.) Kwintambo ukuphucula ukusebenza kwayo.
UJera udibanise ngempumelelo isisombululo se-fiber optic ye-GPON, FTTx, yokwakha inethiwekhi ye-FTTH. Intambo yethu ye-optic iyakwazi ukusetyenziswa kwiluphu esembindini okanye kwiindlela zokugqibela zemayile yezakhiwo zeshishini, uloliwe kunye nokuthuthwa kwendlela, izakhiwo zeshishini, amaziko omhla kunye ne-ect.
Intambo yethu iqinisekisiwe kwilabhoratri yomzi-mveliso okanye ilabhoratri yomntu wesithathu, ukuhlolwa okanye ukuvavanywa kubandakanya ukulahleka kokufakwa kunye novavanyo lokulahleka kokubuyela, uvavanyo lwamandla okuqina, ubushushu kunye noVavanyo loVavanyo lwebhayisikile, uvavanyo lokuguga kwe-UV njl njl ngokwemigangatho ye-IEC-60794, RoHS kunye ne-CE.
IJera ibonelela ngazo zonke izinto ezinxulumene noko zokuhanjiswa kwenethiwekhi ezinje: i-fiber optic cable clamp, i-fiber optic pacth cords, i-fiber optic splice evaliweyo, ibhokisi yokuphelisa ifayibha njl njl.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi lwexesha elizayo!
Intambo ye-Ftth fiber optic ene-Frp Rods, ii-2 Fibers
Ukulahla ikheyibhile nge-Frp Rods, 1 Fibre
Flat Drop Cable ngeentsimbi zentsimbi, 4 Imisonto
Ifayibha ye-Optic Drop Cable ngeentsimbi zentsimbi, ii-2 Fibers
Ukulahla intambo ngeentonga zensimbi, 1 ifayibha
Ftth ifayibha optic intambo kunye zu ucingo kunye zu ro ...
I-Ftth Drop Cable ene-Frp Wire kunye ne-FRP Rods, 1 F ...
I-Ftth yeTrop Cable yentsimbi yentsimbi kunye neentonga ziqinisiwe, ...
Ftth ifayibha optic intambo, ucingo sentsimbi kunye neentonga rei ...
Ftth ifayibha optic intambo Steel Ke iingcingo Rein ...
I-Ftth ye-Cable Steel Wire kunye ne-Frp Rods yomelele, ...